I-Allegory yenceku ekhululiwe - AFRIKHEPRI
I-allegory yenceku ekhululiwe
I-Tanzania Wins Innovation Award nge-Water Filtration System
Isithombe: Ifilimu yokuhamba
Lyena Ephreli 27, 1848, kwasayinwa isimemezelo mayelana nokuqedwa kobugqila. Lo mbhalo wenqabela ngokomthetho ubugqila. Kepha, ingabe sikhululekile ngempela?
Amaketanga alahlekile okhalweni lwethu asekhona lapho singazi lutho khona ngoba insimbi emijondolo yethu ithathelwe indawo ikheji eliwohloka kakhulu. Yize imizimba yethu yayingasashayiwe, ihlazo lisemiqondweni yethu. Leli nxeba alipholi ngoba lisikhumbuza ngobuhlungu obumangazayo: lowo wokukhumbula konke ukuthotshiswa kwezimilo. Ngoba, siseyizigqila zokukhumbula kwethu nokwedlule kwethu. Ngokungazi, sikulungele ukuphinda lezi zinhlupheko, njengokungathi siphinda sikhiphe umdlalo we-sadomasochistic, lowo esawenza nenkosi yethu. Le ndlela emphakathini wanamuhla sifuna ngokungazi isithombe senkosi.
Kepha lokhu akusona yini isiqu sobunanga?
Ngabe sidinga ukuthi namanje sibe nezinduna ezinyaweni nasezihlakaleni ukuqaphela ukuthi umuntu omnyama usagqilazwa kangakanani?
Ngemuva kokususa konke ukukhumbula umlando wethu, amasiko nezinkolo zethu, sanikezwa ilungelo lokuya esikoleni ukuyofunda umlando wabo, amasiko abo kanye nolimi lwabo kepha lokhu akuyona into ukufakwa okusha?
Besingumbumba abawubeka endaweni yabo yokubumba futhi manje sesiyizitsha abazithengisayo futhi ezihlobisa imvelo yazo. Ukudlula esimweni sesilwane kuya kwesinye sento, lesi yisimo sethu esisha somuntu. Asikho isidingo sokuphuphuthekisa izimpumputhe esiyiyo.
Ukulawula okwabiwa ngokuphelele, bavele babeke amatomu ekhanda lehhashi ukuze isilwane sasendle silinyazwe, ngaleyo ndlela belahlekelwe amandla, umdlandla, nenkululeko yaso. Ezigqilazweni eziqedwe, sesibe yizigqila ezikhululiwe kodwa hhayi izidalwa ezikhululekile, ngoba ubugqila benyama buye bavumela isitha esinamandla nesihluku. Lesi siphikisi esingabonakali sibusa phezulu ekuqapheleni kwethu futhi siqondise ukuba khona kwethu ngenqindi yensimbi. Le chimera ye-polycephalous, isithiyo esikhulu ekukhululekeni kwethu, ibizwa ngokuthi ukukhohlisa, ukungazi kanye nesimo. Ukuyinqoba, kufanele sithathe emithonjeni yomlando wethu, futhi sifinyelele ulwazi oluqondile. Lokhu yindlela ukukhanya okuzoxosha ngayo ukungalungi nokuthi ekugcineni sizokhululeka.